Ronaldo: Filimaanta ayaan sameyn doonaa – Gool FM
Ronaldo: Filimaanta ayaan sameyn doonaa
Kaafi December 30, 2017
(Madrid) 30 Dis 2017. Waxaa isa soo taraya xanta ku geedaman aayaha Cristiano Ronaldo, laakiin waxa uu il dhaw ku hayaa mustaqbalka fog, lambar todobada Real Madrid wuu ka dharagsan yahay waxa uu sameyn doono: aflaan!
Portugal-ka dabcan waxa uu haatan diiradda saarayaa ciyaarihiisa balse waxa uu qorsheystay wixii uu sameyn lahaa marka uu dheesha ka fariisto.
“Waxaan jeclaan lahaa in aan sameeyo aflaan, yeesho Hotel-lo,Gym-yo, dharka kula shirkoobo Nike….waxaan isu arkaa ganacsade,” sidaas waxa uu u sheegay Alessandro del Piero oo wareysi uga qaaday Sky Italia. Wareysigaas waxaa la baahin doona bisha Janaayo.
“Hadda waxaa diiradda ii saaran wax aan sameenayo, walow aan aqaan waxa ii cad oo aan dhawaan ama marka ciyaaraha aan ka fariist imaan doona.
“Nolosheyda Kubadda Cagta kaddib wey qurux badnaan doontaa, waan hubaa, uma jeedo lacagta, balse raaxada ah in aan sameeyo waxyaabo kale.”
Halyeyga Man United Beckham oo sawirkan bartiisa bulshada soo dhigay....Ogow sababta?
Mushaarka waalida ah ee ay Chelsea miiska u saartay Hazard oo la ogaaday